IMIHLAHLANDLELA YOMPHAKATHI OSEBENZISA I-UBER: i-Ghana, i-Kenya, i-Nigeria, iNingizimu Afrika, i-Tanzania, i-Uganda KUPHELA
Sifuna ukuthi i-Uber ithokozelwe futhi iphephe kuwo wonke umuntu. Le mithetho ebekiwe yakhelwe ukuqinisekisa ukuthi abagibeli nabashayeli bahamba benethezekle uma besebenzisa i-Uber. Sicela uthathe umzuzwana uyifunde. Ngoba noma ngabe ungumgibeli osuka ku-A oya ku-B – noma usebenzisana nathi ufuna ukuthola imali ethe xaxa njengomshayeli – indlela yakho yokuziphatha ibalulekile.
Hloniphanani omunye nomunye
Phatha abagibeli nabashayeli ngendlela ongathanda ukuthi uphathwe ngayo: ngenhlonipho. Kungubuntu ukuthi ungamemezi, uthuke noma ushaye isicabha semoto. Ngokuthi uqoqe uma ungcolisile – okungaba ukuthatha izibi zakho uye nazo ekhaya noma usule lapho kuchitheke khona isiphuzo sakho – uzogcina imoto isesimweni esihle futhi uqinisekise ukuthi umuntu olandelayo naye uyakuthokozela ukuhamba ngaleyo moto. Okubaluleke kakhulu kunakho konke, khumbula ukuthi uma usebenzisa i-Uber uzohlangana nabantu ongababona behlukile noma becabanga ngendlela engafani neyakho. Sicela ukuthi ukuhloniphe lokho kwehlukana. Sifuna wonke umuntu azizwe emukelekile uma esebenzisa i-Uber.
Nikeza abagibeli nabashayeli isikhala sokukhuleka
Sonke kubalulekile kithi ukuba nesikhala sokukhululeka kanye nobumfihlo. KULUNGILE ukuxoxa nabanye abantu emotweni. Kodwa sicela ungaphawuli ngendlela omunye umuntu abukeka ngayo noma ubuze ukuthi ngabe abashadile na. Njengomgibeli, uma udinga ukushaya ucingo sicela ukhulumele phansi ukuze ugweme ukuphazamisa umshayeli wakho noma abanye abagibeli. Okunye ungalokothi uthinte umuntu osemotweni noma uveze ukumthanda emotweni. Ukukukhumbuza nje, i-Uber inomthetho othi alwenziwa ucansi emotweni. Lokhu kuthi kungabi nakuziphatha okunocansi phakathi kwabashayeli nabagibeli, noma ngabe kwenzenjani.
Wonke umuntu ufuna ukusuka ku-A aye ku-B ephephile. Ngakho-ke qinisekisa ukuthi ulandela umthetho obekiwe. Bheka amasu ethu okuphepha komgibeli. Noma ngabe uhleli esihlalweni esiphambili noma kwesingemuva, fasa ibhande uma ungena emotweni – futhi sicela ushiye isibhamu sakho ekhaya. Yebo, abashayeli banomthwalo othile ngokuphepha ku-Uber. Lokhu kusho ukuthi sihamba ngesivinini esibekiwe; ukungabhali imiyalezo efonini ube ushayela; ukuhlala sisebenzisa indawo ebekiwe yokubeka umakhalekhukhwini; nokungashayeli nangephutha uma uphuzile noma udle izidakamizwa. Uma ushayela bese uzizwa ukhathele, phumula. Njengoba ongoti besho, “ukulala yiyona ndlela kuphela yokuvimbela ubungozi bokuzela ngenkathi ushayela.”
Izingane kumele zibhekwe
Abantu abadala kuphela abangaba ne-akhawunti yokugibela i-Uber. Umzali noma umbheki wengane kumele aqinisekise ukuthi abantwana bahamba nomuntu omdala ngaso sonke isikhathi.
Imbuyisambiko yenza ukuthi sonke senze kangcono
Noma ngabe ungumgibeli noma ungumshayeli, sicela ukuthi ulinganise uhambo lwakho ekugcineni. Imbuyisambiko eyiqiniso iyasisiza ukuthi siqinisekise ukuthi wonke umuntu uyaphendula ngendlela yabo yokuziphatha. Lokhu kuphendula kwenza ukuthi kuhlonishwane, kube nendawo ephaphile kubo bobabili abagibeli nabashayeli. Futhi uma kukhona okwenzekayo ngenkathi ugibele – noma ngabe ingozi yomgwaqo noma ukuhilizisana – qinisekisa ukuthi uyakubika ngokuthi uthinte “Usizo” ku-app ukuze ithimba lethu eleseka amakhasimende ezolandelela lolo daba.
Le mihlahlandlela engezansi iyasiza ukuchaza okunye kwezindlela ezithile zokuziphatha ezingabangela ukuthi ungabe usakwazi ukugibela noma ushayele i-Uber.
YINI ENGENZA UKUTHI ABAGIBELI BANGAKWAZI UKUNGENA KU-UBER
Le nqubomgomo isiza ukuchaza izinhlobo zezindlela zokuziphatha ezingaholela ekutheni abagibeli bangakwazi ukungena ku-Uber. Sicela ukhumbule ukuthi uma nihamba niyiqoqo, noma uvumele abanye abantu ukuthi bagibele u-Uber nge-akhawunti yakho, uwena ozoba nomthwalo ngendlela abaziphatha ngayo emotweni.
Ukuqinisekisa inhlonipho, ukuphepha kwabo bonke abashayeli kanye nabagibeli
Indlela oziphatha ngayo ngenkathi usebenzisa i-Uber ingaba nomthelela ekuphepheni nasekunethezekeni kwabashayeli, kanjalo nalabo ogibele nabo. Yingakho kumele ubone okumele ukwenze futhi uziphathe kahle kwabanye abantu abasemotweni ngenkathi ugibele i-Uber – njengoba ungenza kunoma yiyiphi indawo yomphakathi.
Nazi ezinye zezizathu ezingenza ukuthi ungasakwazi ukungena ku-Uber njengomgibeli:
Ukulimaza impahla yomshayeli noma yabanye abagibeli. Isibonelo, ukulimaza imoto, ukulimaza noma ukubulala ucingo, ukuchitha ukudla noma isiphuzo ngenhloso, ukubhema noma ukuphalazela emotweni ngenxa yokudakwa kakhulu.
Ukuthintana ngomzimba nomshayeli noma abanye abagibeli. Njengoba imihlahlandlela yethu yomphakathi ikubeka kucace, akumele uthinte noma uveze ukuthanda abantu abasemotweni. Ukukukhumbuza nje, i-Uber inomthetho othi alwenziwa ucansi emotweni. Lokhu kuthi kungabi nakuziphatha okunocansi phakathi kwabashayeli nabagibeli, noma ngabe kwenzenjani. Futhi ungalokothi ushaye noma ulimaze umshayeli noma omunye umgibeli.
Ukusebenzisa ulimi oluhlukumezayo noma ukwenza izinto ezihlukumezayo. Isibonelo, ukubuza imibuzo esondelene kakhulu nomuntu, ukusabisa ngamazwi, kanye nokuphawula noma wenze izinto ezikhombisa ukulwa, ukufuna ucansi, ukubandlulula, noma ukungahloniphi.
Akuxhumana nomshayeli noma omunye umgibeli emva kokuphela kohambo okungadingekile. Isibonelo, ukuthumela umyalezo, ukushaya ucingo, noma ukuvakashela umuntu othile emva kokuphela kohambo. Khumbula, emazweni amaningi uyakwazi ukushayela umshayeli ucingo noma umbhalele umyalezo ngqo ngokusebenzisa uhlelo lwe-Uber ngaphandle kokuthi unikezele ngenombolo yakho yocingo. Lokhu kusho ukuthi inombolo yakho ihlala iyimfihlo futhi ayinikezwa abashayeli.
Ukwephula umthetho obekiwe ngenkathi usebenzisa i-Uber. Isibonelo, ukuza namabhodlela avuliwe otshwala noma izidakamizwa emotweni; ukuhamba niyiqembu elikhulu nedlule isibalo esibekiwe samabhande asezihlalweni zemoto; ukucela umshayeli aphule umthetho womgwaqo onjengesivinini esibekiwe; noma ukusebenzisa i-Uber ukuze wenze ubugebengu, okubandakanya izidakamizwa nokuntshontshwa kwabantu ngenhloso yokuhweba noma ukuhlukunyezwa kwezingane ngokocansi.
Uma saziswa ngalezi zinhlobo zezinkinga zokungaziphathi kahle, sizoxhumana nawe ukuze sizophenya ngazo. Kuzoya ngokohlobo lokukukhathazayo, singase siyimise i-akhawunti yakho ngesikhathi sophenyo. Uma izinkinga zinzima kakhulu noma kuyicala oliphindayo, noma ungafuni ukusebenzisana nathi, ungase ulahlekelwe ukungena ku-Uber. Noma yiyiphi indlela yokuziphatha ebandakanya udlame, indlela yokuziphatha embi ethinta ezocansi, ukuhlukumeza, ukucwasa, noma ukwenza okungekho emthethweni ngenkathi usebenzisa i-Uber kungaholela ekuthini ulahlekelwe yi-akhawunti yakho. Phezu kwalokho, uma abomthetho bebandakanyeka, sizobambisana nophenyo ngokuhambisana nemihlahlandlela yokusetshenziswa KoMthetho.
Imigomo yokusebenzisa i-Uber
I-Uber awuvumeli ukuthi abagibeli nabashayeli baphathe izibhamu uma besemotweni ngenkathi besebenzisa uhlelo lwethu. Ungafunda kabanzi mayelana nenqubomgomo engavumeli izibhamu lapha.  Uma wephula inqubomgomo engavumeli izibhamu yakwa-Uber, ungase ulahlekelwe ukungena ku-Uber.
I-Uber inenqubomgomo engakwemukeli nhlobo ukucwasa kwanoma yiluphi uhlobo. Lokhu kusho ukuthi uzolahlekelwa ukungena ku-akhawunti yakho uma utholakale ukuthi ucwasa abashayeli noma abagibeli ngenxa yobuhlanga, inkolo, imvelaphi ngobuzwe, ukuba nokukhubazeka, isimo socansi, ubulili, isimo sokushada, ubulili azihlonza ngabo, iminyaka yobudala noma nakuphi okunye okuvikelekile ngaphansi komthetho obekiwe.
Ukukhwabanisa noma indlela yokuziphatha engekho emthethweni
Ukukhwabanisa noma indlela yokuziphatha engekho emthethweni ibukela phansi ukuthembeka i-Uber esizakhele kona. Singase sivale noma iyiphi i(ama)-akhawunti athintekayo kulezi zinhlobo zezenzo, okubandakanya: ukusebenzisa budedengu izikhangisi ezigqugquzelayo; ukushayisana phakathi komgibeli nomshayeli; ukuphika imali yokugibela ngenhloso yokukhwabanisa noma izizathu ezingemthetho; noma ama-akhawunti aphindekile.
YINI ENGENZA UKUTHI ABASHAYELI BANGAKWAZI UKUNGENA KU-UBER
Uma ungumshayeli, i-akhawunti yakho isavaliwe okwesikhashana noma ingasasebenzi, kunciphisa amathuba akho okwenza imali. Yingakho sikholelwa ukuthi kubalulekile ukuthi sibe nezinqubomgomo ezicacile ezichaza izimo lapho unganqtshelwa ngaphansi kwazo ukungena ku-Uber; (uma kungenzeka) ungaphinda uyisebenzise kanjani i-app yakho; nokuthi ungakwazi ukudlulisa isicelo sokuthi zibuye zibuyekezwe izinqumo.  Zizohlala zikhona izimo obungazilindele ezingase ekugcineni ziholele ekutheni ulahlekelwe ukungena ku-akhawunti yakho njengomshayeli – sizohlala siyilungisa le nqubomgomo – kodwa lokhu okulandelayo kwanele ukuthi i-Uber ithathe izinyathelo: izinga; ukuphepha; ukukhwabanisa; kanye nokucwasa.
Abagibeli abasebenzisa i-Uber balindele ukuthi abashayeli bashayele ngokuphepha, nokuthi babe nomusa futhi beqeqesheke. Uma umsebenzi usezingeni eliphezulu, baningi abagibeli abazofuna ukugibela, okuzokwenza ukuthi kube namathuba amaningi okuthi abashayeli bazenzele imali. Umsebenzi ongekho ezingeni elihle unomthelela omubi ekuhambeni kwesikhathi kunalokhu okubaluliwe. Ziningi izindlela esihlola ngazo izinga lomshayeli, ebaluleke kakhulu isilinganiso se-Star Ratings kanye nezinga lokukhanselwa.
Njalo emva kohambo, abashayeli nabagibeli bayakwazi ukulinganisa izinga lomunye nomunye ngokusebenzisa isilinganiso sezinkanyezi ezinhlanu, baphinde banike imbuyisambiko ngokuthi belunjani uhambo. Le ndlela esebenza zinhlangothi zombili yenza nobani nobani aphendule ngendlela yokuziphatha kwakhe. Ukuphendula kusiza ngokuthi kuletha inhlonipho, indawo ephephile yabo bobabili abashayeli nabagibeli. Abashayeli bangakwazi ukubona ukuthi isilinganiso sabo simi kuphi ngokucofa ku-Ratings ku-app yabasebenzisana ne-Uber.
Libalwa kanjani izinga lami njengomshayeli? Izinga lakho lincika ezinkanyezini ozitholayo emva kohambo ngalunye ozinikwa abagibeli (kusukela ku-1 kuya ku-5), kuze kufike ohambeni lwama-500 lokugcina noma inani lesibalo sohambo olulinganisiwe olwenzile, uma kungaphansi kwangama-500.
Indlela elula kakhulu yokugcina izilinganiso zezinga ziphezulu kumele usebenze kahle ngohambo ngalunye. Abashayeli abasebenzisa i-Uber ngokuvamisile basebenza kahle kakhulu, ngakho-ke uhambo nohambo luhamba kahle. Kodwa siyazi ukuthi ngesinye isikhathi uhambo aluhambi kahle – yingakho sibheka isilinganiso ovame ukusithola ohambeni olungama-500 (noma inani lesibalo sohambo olulinganisiswe, uma kungaphansi kwengama-500). Lokhu kukunika ithuba lokuthi uzame ukwenza kangcono ekuhambeni kwesikhathi.
Yini eholela ekuthene ulahlekelwe ukungena ku-akhawunti yakho? Idolobha ngalinye linezinga elibekiwe elincane ongalithola. Lokhu kwenziwe ngenxa yokuthi kunokwehluka kwamasiko endleleni abantu abasemadolobheni ahlukile abalinganisana ngayo. Sizokwazisa ekuhambeni kwesikhathi uma ukulinganiswa kwakho sekuzofika kulo mkhawulo, futhi uzophinde uthole ulwazi mayelana nezifundo zokwenza ngcono izinga ezingakusiza ukuthi wenze kangcono. Kodwa-ke, uma izinga lesilinganiso sakho silokhu singaphansi kwesincane esibekiwe emva kokwaziswa izikhathi eziningi, uzolahlekelwa ukwazi ukungena ku-akhawunti yakho. Singakuvumela ukuthi uphinde ukwazi ukungena ku-akhawunti yakho uma ungakwazi ukuletha ubufakazi bokuthi usenzile wasiqeda esinye sezifundo zokuthuthukisa izinga.
Ukukhansela komshayeli kwenzeka uma wamukela uhambo oluceliwe bese luyakhanselwa. Ukukhanselwa kohambo kwenza isithombe esibi sokugibela kuwe futhi kunomthelela omubi nakwabanye abashayeli. Siyaqonda ukuthi zingaba khona izikhathi lapho kuba khona okuvelayo bese kudinga ukuthi ukhansele uhambo obusulemukelile. Kodwa ukunciphisa ukukhansela kubalulekile ukuze uhlelo luthembeke.
Libalwa kanjani izinga lami lokukhansela? Izinga lakho lokukhansela lincike esibalweni sohambo olukhanseliwe esibalweni sohambo obulemukelile. (Isibonelo, uma wamukele uhambo oluyi-100 bese ama-4 ekhanselwa, izinga lakho lokukhansela lizoba ngu-4 %.) Abashayeli abasezingeni eliphezulu bavamise ukuba nezinga lokukhansela elingaphansi kuka-5%.
Yini engenza ukuthi ungakwazi ukungena ku-akhawunti yakho? Idolobha ngalinye linezinga elibekiwe lokukhansela, elincike ezingeni elivamile lokukhansela kwabashayeli bakuleyo ndawo. Sizokwazisa izikhathi eziningi uma izinga lakho lokukhansela liphezulu kakhulu noma uma uhlala njalo ngokukhansela kunabanye abashayeli edolobheni lakho, emva kwalokho uzobe usuvalelwa ungakwazi ukungena ku-app. Uma izinga lakho lokukhansela liqhubeka nokudlula umkhawulo obekiwe, ungase ulahlekelwe ukungena ku-akhawunti yakho.
Amazinga aphezulu okwemukela abaluleke kakhulu emsebenzini othembekile , nowezinga eliphezulu, kodwa ukungalwemukeli uhambo akukuholeli ekuvalweni kwe-akhawunti yakho unomphelo.
Ukuhlala wemukela izicelo zohambo kwenyusa imali etholwa abashayeli futhi kwenza ukuthi uhlelo lusebenze kahle. Siyazi ukuthi kwesinye isikhathi kuba nezinto ezikuvomba ukuthi wemukele zonke izicelo zohambo, noma ungase ufune ukuthatha ikhefu. Kodwa ukungemukeli izicelo zohambo kuyabambezela kuphinde kwehlise ukwethembeka kohlelo lwethu. Uma ungafisi ukwamukela uhambo, sicela usayindele ukuphuma, uyivale i-akhawunti.
Uma uhlala ngokuchitha izicelo zohambo, sizothatha ngokuthi awusafuni ukwemukela naluphi uhambo kanti futhi ungase uvalelwe ngaphandle ohlelweni.
I-Uber isebenzisa ubuchwepheshe ukugcina abashayeli nabagibeli bephephile, isibonelo ngokulandela hambo ngalunye nge-GPS kanye nokuvumela abagibeli babelane ngohambo lwabo ngesikhathi lwenzeka nomndeni wabo noma abangani. Lokhu konke kwesekwe uhlelo olunzulu lokuhlola abashayeli ngaphambi kokuqala ukusebenza. Okunye sinethimba eliphendula uma kubikwe izigameko olusebenza 24/7 ukuze liphenye ngalezo zigameko.
Izenzo ezisabisa ukuphepha kwabashayeli nabagibeli zizophenywa kanti, uma ziqinisekiswa, kungaholela ekuvalweni kwe-akhawunti yakho unomphelo. Isibonelo:
Ukuthintana ngomzimba nabagibeli. Njengoba imihlahlandlela yethu yomphakathi ikubeka kucace, akumele uthinte noma uveze ukuthanda abantu abasemotweni. Ukukukhumbuza nje, i-Uber inomthetho othi alwenziwa ucansi emotweni. Lokhu kuthi kungabi nakuziphatha okunocansi phakathi kwabashayeli nabagibeli, noma ngabe kwenzenjani. Futhi ungalokothi ushaye noma ulimaze umgibeli.
Ukuxhumana okungavumelekile nomgibeli emva kokuphela kohambo. Isibonelo, ukubhalelana imiyalezo, ukushaya ucingo, noma ukuvakashela umuntu othile emva kokuba uhambo seluphelile.
Ukwephula umthetho obekiwe ngenkathi usebenzisa i-Uber. Isibonelo, ukubhala imiyalezo ngenkathi ushayela; ukuhamba ngesivinini noma ukwephula imithetho yomgwaqo; kanye nokusebenzisa i-Uber ukwenza ubugebengu, okubandakanya ukushushumbisa izidakamizwa nokuhwebisa ngabantu noma ukuhlukumeza ngokocansi izingane.
Ukushayela okuphephile. I-Uber ilindele ukuthi abashayeli basebenzise i-app ukushayela ngokuphepha ngaso sonke isikhathi.
Yini engenza ukuthi ungakwazi ukungena ku-akhawunti yakho? Uma saziswa ngalezi zinhlobo zezinkinga zokungaziphathi kahle, sizoxhumana nawe ukuze sizophenya ngazo. Kuzoya ngokohlobo lokukukhathazayo, singase siyimise i-akhawunti yakho ngesikhathi sophenyo. Uma izinkinga zinzima kakhulu noma kuyicala oliphindayo, noma ungafuni ukusebenzisana nathi, ungase ulahlekelwe ukungena ku-Uber. Noma yiyiphi indlela yokuziphatha ebandakanya udlame, indlela yokuziphatha embi ethinta ezocansi, ukuhlukumeza, ukucwasa, noma ukwenza okungekho emthethweni ngenkathi usebenzisa i-Uber kungaholela ekuthini ulahlekelwe yi-akhawunti yakho. I-Uber angayimisa i-akhawunti yanoma yimuphi umshayeli abathola ngaye izikhalazo eziningi zokushayela kabi, ukushayela okungaphephile, noma ukushayela okuphazamisekile ngenkathi esebenzisa uhlelo lwe-Uber. Phezu kwalokho, uma abomthetho bebandakanyeka, sizobambisana nophenyo ngokuhambisana nemihlahlandlela yokusetshenziswa KoMthetho.
Alufakwa ngezidakamizwa notshwala
I-Uber ayikuvumeli nhlobo ukusetshenziswa kwezidakamizwa noma utshwala yilabo abasebenzisanayo ngenkathi beshayela.
Yini engenza ukuthi ungakwazi ukungena ku-akhawunti yakho? I-akhawunti yomshayeli otholakale esebenzise izidakamizwa noma ephuzile ebe esebenzisa i-Uber app izovalwa unomphelo. I-Uber ingase iyivale unomphelo i-akhawunti yomshayeli othola izikhalazo eziningi ezingaqinisekisiwe ngokusebenzisa izidakamizwa noma utshwala.
Ukuthobela imithetho yomgwaqo
Silindele ukuthi abashayeli abasebenzisa i-Uber app bathobele yonke imithetho esebenzayo yomgwaqo ngaso sonke isikhathi.
Yini engenza ukuthi ungakwazi ukungena ku-akhawunti yakho? I-Uber ingayivala unomphelo i-akhawunti yakho uma wenza izenzo ezifana nalokhu: ukubandakanyeka ezenzweni ezingekho emthethweni ube usebenzisa i-Uber app; ukungayibhalisi imoto noma ukungabi nayo imvume yokushayela; kanye nokuthola ukuthi wenze izinto ezinkulu emgwaqeni, noma amathikithi amaningi aveza ukushayela okungaphephile, ube usebenzisa i-Uber app.
Bonke abashayeli abafuna ukusebenzisa i-Uber app kumele bahlolwe ukuze kuqinisekiswe ukuphepha kanye nokubona ukuthi uyahambisana na nezidingo ze-Uber.
Yini engenza ukuthi ungakwazi ukungena ku-akhawunti yakho? Sizovala i-akhawunti yakho unomphelo uma imoto noma uma kuhlolwa imvelaphi kuvela ukuthi wephule imigomo yokuphepha ye-Uber noma okunye okuyizidingo zabalawuli bendawo.
Ukuze sigcine ukuba sobala nokuphepha kohambo ngalunye kubo bonke abagibeli, izinto ezenziwe ngaphandle kohlelo lwe-Uber – njengokulandwa kungaziwa – akuvumelekile.
Yini engenza ukuthi ungakwazi ukungena ku-akhawunti yakho? Umshayeli simuthathela izinyathelo ngokwenza okufana nalokhu: ukwamukela abagibeli ngokungemthetho ebe esebenzisa uhlelo lwe-Uber; ukulimaza igama lebhizinisi, njengokusebenzisa umaka wokuhweba wakwa-Uber noma izinto ezenziwe ngengqondo, noma ukwephula isivumelwano somshayeli ne-Uber; kanye nokukhansela uhambo oluthole ngokusebenzisa i-app, ukuze umshayeli ezohlawulisa umgibeli ngohambo olungasafakiwe ohlelweni lwe-Uber.
Izenzo zokukhwabanisa ziqeda ukwethembeka kwe-Uber esizakhele khona. Yingakho sihlala siqaphile ukukhwabanisa okwenziwa abagibeli nabashayeli abadlala ngohlelo lwethu.
Yini engenza ukuthi ungakwazi ukungena ku-akhawunti yakho? Sizomisa noma yiyiphi i-akhawunti noma ama-akhawunti athintekayo ekukhwabaniseni, okungabandakanya: ukwenyusa ngenhloso isikhathi noma ibanga lohambo; ukwamukela uhambo ungenazo izinhloso zokulufeza, kubandakanya ukwenza izinto eziholela ekutheni abagibeli bakhansele; ukuzakhela ama-akhawunti abagibeli abangekho noma abashayeli ngenhloso yokukhwabanisa; ukufaka isicelo sokukhokhelwa izimali noma izinhlawulo ezikhwabanisiwe, njengezimali zokuhlanza imoto ezingekho; kanye nokwamukela ngenhloso noma ukuthatha uhambo olukhwabanisiwe noma olungamanga.
Ulwazi lomuntu oluqondile
Uhlelo lwe-Uber lwenzelwe ukuthi linike abagibeli ulwazi lokuhlonza abashayeli babo kanye nezimoto zabo, olufana namagama abo, izithombe, uhlobo lwemoto kanye nenombolo yemvume yepuleti, ngaphambi kokuthi luqale uhambo. Ulwazi olungaqondile noma oselungasebenzi luyabadida abagibeli aknti futhi kungathikameza ukusebenzisa kwabo i-Uber.
Yini engenza ukuthi ungakwazi ukungena ku-akhawunti yakho? Sizoyimisa i-akhawunti yakho uma kwenzeka lokhu: unika i-Uber ulwazi olungaqondile; ukuvumela omunye umuntu asebenzise i-akhawunti yakho; kanye nokuthatha uhambo usebenzisa imoto engaphasisiwe.
Phezu kwalokho, sizothatha izinyathelo ukuze sivimbele ukuthi noma imuphi umshayeli amaphepha adingekayo angamukeleki – njengezincwadi zokushayela esezidlulelwa isikhathi – ngeke akwazi ukungena ku-inthanethi kuze kube ukuthi lowo mshayeli uhlinzeka ngolwazi lwakamuva.
Inhloso ye-Uber ukuxhumanisa abagibeli nesithuthi esithembekile, yonke indawo sawo wonke umuntu. Sinenqubomgomo engamelani nhlbo nokucwasa kwanoma yiluphi uhlobo kwa-Uber.
Yini engenza ukuthi ungakwazi ukungena ku-akhawunti yakho? Akuvumelekile ukuthi unqabe ukuhlinzeka usizo ngenxa yendawo lapho umuntu eya khona, noma ngokubheka izinto ezifana nobuhlanga, inkolo, imvelaphi yobuzwe, ukuba nokukhubazeka, ubudlelwano ngokocansi, ubulili, isimo sokushada, ukuhlonzeka kobulili, iminyaka yobudala noma ezinye izinto ezivikelekile ngaphansi komthetho wesifunda, umbuso noma wasendaweni. Izenzo ezinjengalezi zizoholela ekutheni i-akhawunti yakho ivalwe unomphelo.
Sifuna ukulekelela ngokwenyusa ongakhetha kukho uma ufuna isithuthi ikakhulu kubagibeli abanokukhubazeka. Yingakho sinolwazi olutholakalayo kubashayeli bethu ngalesi sihloko. Bheka lapha ukuze uthole okuningi ngokuzinikela kwe-Uber ekufinyelelekeni. Silindele ukuthi abashayeli abasebenzisa uhlelo lwe-Uber bathobele yonke imithetho yombuso, isifunda kanye neyasekhaya elawula ukuthuthwa kwabagibeli abanokukhubazeka, kubandakanya ukugibeza izilwane ezihlinzeka ngosizo.
Ukubuyela emgwaqeni emva kokumiswa kwe-akhawunti yakho
Uma i-akhawunti yakho kade imisiwe ngezizathu ezimayelana nezinga lokusebenza ezifana nokuthola izilinganiso eziphansi ezinkanyezini, ungase ube nalo ithuba lokubuyela emgwaqeni. Khuluma nethimba lakho eliseduze le0Uber noma uye ku help.uber.com ukuze uthole okuthe xaxa.
Ilungiswe: June 30, 2017
 Imigomo yokuSebenzisa yesizwe ngasinye ingatholakala lapha: i-Ghana, i - Kenya, i- Nigeria, iNingizimu Afrika, Tanzania, i- Uganda.
 Kufinyelele lapho kuvunywa khona ngumthetho.
 Le nqubomgomo ayisebenzi kubashayeli abasebenzisa uhlelo lwe-Uber lwe-UberRUSH kanye ne-UberEATS.